Kusinda kuyitshe kongenamlenze | News24
Kusinda kuyitshe kongenamlenze
ISITHOMBE:NOMPENDULO NGUBANE UNkk Nomusa Zuma waseWillofontain uthi siyamkhathaza isimo sendawo kanye nedlu ahlala kuyo.
KUSINDA kuyehlela kowesifazane waseWillofontain ongenamlenze ebe ehlala yedwa njengoba ekhala ngesimo sendlu ohlala kuyona. Uthi iyavuza kanti inezimbobo ezingenisa amakhaza kanye namanzi uma lina izulu.
UNkk Nomusa Zuma (52) onqunywe umlenze ngonyaka odlule ngenxa yesifo sikashukela uthi kunzima ukuhlala kule ndlu ohlala kuyo njengoba ingekho ngisho indlu yangasese okuze kuphoqeleke ukuthi uma ezikhulula lokho akwenze endlini kuplastiki.
Echazela iphephanmdaba i-Echo ngesimo athe sibuhlungu kakhulu kuyena, uthe okunye okumenza abe nokwesaba ukuhlala kwakhe endlini, umsindo kanye nokuzizwa engaphephile.
Uphinde wathi uyafisa ukuba akhelwe indlu ezoba sesimeni esihle ukuze azokwazi ukuhlala akhululeke. UZuma uhlala endlini engamagumbi amathathu isakhiwo sayo esilapho kwakhiwe khona ihholo kanye nenkundla yezemidlalo yomphakathi waseWillowfontain.
Uthe okunye okumhlukumezayo ukuthi le ndawo kungena kuyo yonke inhlobo yomuntu ngoba iyindawo esetshenziswa umphakathi.
“Ihholo kulapho kwenzelwa khona izinto ezehlukahlukene zomphakathi waseWillofontain namaphethelo,” kubeka yena.
“Abantu bayafika bezobamba izinkonzo zemingcwabo nemicimbi eyehlukahlukene khona lapha ehholo. Akugcini ngemingcwabo kodwa futhi kuba nemicimbi ehlukene eba khona ngezimpelasonto.
“Lokho kuyinto engihlukumezayo ngoba abantu abasuke belapha ukuzothamela imicimbi yabo, bayagcaluza lapha ngaphakathi ngigcine sengisaba ngoba ngingazi ukuthi luhlobo luni lwabantu.
“Akugcini lapho kodwa babanga umsindo kanti futhi ngeke uze ubalawule ngesikhathi okumele bahambe ngaso, lokho kugcina sekungenza ngibe nokwesaba ngoba ngihlala ngedwa,” kusho uZuma.
Ngokuthola kwe-Echo indlu lena ahlala kuyo uZuma kwabe kuhlala umalume wakhe osewadlula emhlabeni. I-Echo iphinde yathola ukuthi lo muzi wawuhlala abelungu ngezikhathi zakudala kanti ke uZuma ubehlala nomalume wakhe obe eseshona eshiya yena.
Ikhansela lendawo uMnu Sibusiso Mkhize uthe bayazi ngodaba nangesimo sikaZuma kungakho ngenyanga edlule bamvakashele bamlethela ukudla ukuze athole ukusizakala futhi athole nokuya ngasethunjini.
“Udaba lwakhe ngazibonela mina ngaphandle kokutshelwa umuntu. Emva kokubona isimo sakhe simvakashele ukuyobheka, safike sathola ukuthi isimo sendawo ahlala kuyo simbi kakhulu. Udaba lwakhe ngiludlulisele eMnyangweni wezokuHlaliswa kwaBantu ukuthi kebalubheke babone ukuthi bangamsiza kanjani, lusezithebeni ezifanele sikhuluma nje,” kuchaza uMkhize.
Okunye uZuma athe uyakufisa ukukwazi ukuthola impesheni yokugula ngenxa yokuthi akasenawo umlenze. Uthe okufike kube yinselelo kuyena ukungabi nayo imali yokuhamba aye emahhovisi okubhaliswa kwempesheni.
“Ngiyafisa ukube ngabe sengiyasithola isibonelelo semali kahulumeni yokugula kodwa angibi nayo ngisho imali yokuya emahhovisi abo ukuyofaka isicelo. Nokuba ngilala ngidlile ngisizwa omakhelwane abangilethela ukudla,” kubeka uZuma